Football Khabar » ‘तनावपूर्ण’ खेलमा चिलीलाई हराउँदै अर्जेन्टिना तेस्रो : मेस्सीलाई रातो कार्ड !
‘तनावपूर्ण’ खेलमा चिलीलाई हराउँदै अर्जेन्टिना तेस्रो : मेस्सीलाई रातो कार्ड !
‘तनावपूर्ण’ खेलमा साबिक विजेता चिलीलाई हराउँदै साबिक उपविजेता अर्जेन्टिना ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलको तेस्रो टिम बनेको छ । नेपाली समयअनुसार आइतबार बिहान तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा अर्जेन्टिनाले चिलीलाई २–१ ले हराउँदै तेस्रो स्थान सुरक्षित गर्न सफल भयो ।
निकै तनावपूर्ण खेलमा अर्जेन्टिनी कप्तान लिओनल मेस्सी र चिलियन कप्तान ग्यारी मेडेलले एकसाथ रातो कार्ड पाए । खेलको ३७औं मिनेटमा आपसमा झगडा गरेको आरोपमा रेफ्रीले दुवै खेलाडीलाई रातो कार्ड देखाउँदै मैदानबाट निकालेका थिए । त्यसक्रममा दुवै टोलीका खेलाडीबीच केहीबेर घम्साघम्सी र हात हालाहालको स्थिति सिर्जना भएको थियो ।
चिलीको बक्स क्षेत्रमा चिलियन कप्तान मेडेलले मेस्सीबाट बल क्लियर गर्नेक्रममा दुई खेलाडीबीच हलुका ट्याकल भएर बल लाइनबाहिर गएको थियो । तर, त्यसपछि मेडेलले रिसाउँदै फर्किएर मेस्सीलाई छातीले धक्का दिन्छन् । मेस्सीले पनि जवाफमा छातीले नै धक्का दिन्छन् । सोक्रम बढ्छ । र, अवस्थाले थप उग्र रूप लिन्छ । त्यसपछि रेफ्रीले दुवै खेलाडीलाई रातो कार्ड दिएर मैदानबाट निकाल्छन् ।
त्यसअघि खेलमा अर्जेन्टिनाले १२औं मिनेटमा सर्जियो अगुएरोको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । सो गोलमा कप्तान मेस्सीले असिस्ट गरेका थिए । फेरि खेलको २२औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाका लागि पाउलो डिबालाले दोस्रो गोल गरेपछि अर्जेन्टिनाले खेलमा २–० को सहज अग्रता बनाएको थियो ।
तर, खेल ३७औं मिनेटमा पुगेपछि एकाएक तनावग्रस्त हुन्छ । एकैपटक दुई टिमका कप्तान रातो कार्ड खाएर मैदान छाडेपछि त्यसपछि पनि खेलमा थप तनावपूर्ण अवस्था आइरहन्छ । पहिलो हाफमा अर्जेन्टिनाले २–० को सहज अग्रता बनाएर चिलीमाथि दबाब बढाएको थियो ।
दुवै टिम १०–१० खेलाडीमा सीमित भएको खेलमा दोस्रो हाफमा सुरुबाटै झन् घम्साघम्सीपूर्ण दृश्य देखिन थाल्छन् । दुई रातो कार्ड र ७ पहेंलो कार्डको वर्षा भएको खेलमा चिलीले खेलको ५९औं मिनेटमा पेनाल्टी पायो । बक्स क्षेत्रमा अर्जेन्टिनाका खेलाडीले चिलीका खेलाडीलाई फउल गरेपछि रेफ्रीले भिएआरको प्रयोग गरेर पेनाल्टी मौका दिन्छन् । जसमा अर्टुरो भिडालले सहजै गोल गरेर खेल २–१ बनाएपछि चिलीले खेलमा फर्किने संकेत गरेको थियो ।
तर, त्यसपछि निर्धारित ९० मिनेट र इन्जुरी ६ मिनेटको समयमा पनि चिलीले थप गोल गर्न नसक्दा खेल अर्जेन्टिनाले २–१ ले जित्यो । यो जितसँगै अर्जेन्टिना यस संस्करणको तेस्रो टिम बन्यो ।
प्रकाशित मिति २१ असार २०७६, शनिबार २०:५८